Jilli ADO Ministira Muummee waliin mariyatan - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Aanga'oota ADO Ministira Muummee waliin yeroo mariyatan
Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad har'a jila oggantoo Adda Dimokiraataawaa Oromoo (ADO) Roobii darbe biyya galee waliin mari'ataniiru.
Akka barreefama fuula Feesbuukii Waajira Ministeera Muummeerratti baheetti, oggantoonni ADO kun karaa nagaatiin marii-qajeelfannaa siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaachuuf walii galuu isaanii ifa gadhaniiru.
Gama lamaaniinu tokkummaa Itoophiyaa cimsuufi sirni dimokiraasii biyyattii hundee akka cimfatu irratti fulleeffachuun waliin hojjachuuf walii galaniiru.
Aanga'oonni ADO guyyaa kaleessaa yeroo biyya galan akka ibsanittis, haala jijjiirama biyya keessatti uumamaa jiruufi kaayyoo qabsoo karaa nagaa, kan yeroo waggaa jaha dura hundeeffaman lafa kaawwatan irratti hundaa'uun biyya galanii uummata waliin qabsaa'uuf yaalaa turuusaanii dubbataniiru.
Maree mootummaa waliin taasisaniin boodas sagantaa paartiisaanii akka beeksisan himanii, dhimmi guddaan irratti xiyyeeffatan garuu federeeshiniin amma jiru kun akka dimokiraataawaa ta'u hojjechuudhas jedhan.
Lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii addunyaarratti miliyoona 6.6 caaleera.
Eegduun Paarkii Gaarreen Baalee badhaafaman eenyuu miidhaa irraangahee?
Wayita addunyaan Covid-19n raafamaa jirtutti Chaayinaan hojii idileesheetti deebitee?
Godina Kafaatti namoota du'an irratti Covid-19 argamunsaa yaaddoo uumee
Daandiin guddichi Waayit Haawusitti geessu ''Black Lives Matter''n mogga'e
Hoogganaan Al-qaa'iidaa damee Afriikaa Kaabaa ajjeefame
MM Abiy Ahimad duula biqiltuu biiliyoona 5 dhaabuu eegalsiisan
'Miseensonni 'Abbaa Torbee' ragaa waliin to'ataman'
Itoophiyaatti namootni haaraan 169 Covid-19’n qabaman, duuti tokko galmaahe